Yakachipa tsika jira simbi yakakotama zvikamu fekitori nevatengesi | Ouzhan
Sheet simbi zvikamu zvinosanganisira kupfugama, kugadzirisa kwekuchinja kona ye sheet kana ndiro. Zvakadai sekukotama kweplate kuita V chimiro, U chimiro, nezvimwewo, Sheet simbi zvikamu zvigadzirwa zvinogadzirwa nesheet simbi tekinoroji. Hatigone kuita tisina machira esimbi kwese kwese muhupenyu hwedu. Sheet simbi zvikamu zviri kuburikidza nefilament simba ichitenderera, laser kucheka, inorema kugadzira, simbi yekubatanidza, simbi kudhirowa, plasma kucheka, chaiyo Welding, roll yekuumba, jira simbi kupfugama kuumba, kufa kwekugadzira, mvura jet kucheka, kunyatsogadzirisa.
Tsika jira simbi kukotama zvikamu-kunyatsoita sheet simbi kukotamisa kugadzira michina zvikamu
Sheet simbi inotsanangurwa se: jira simbi ndeye yakazara inotonhora yekushanda mashandiro esimbi machira (kazhinji ari pazasi pe6mm), kusanganisira kuveura, kubaya / kucheka / kuumbiridza, kupeta, kupisa, riveting, kupwanya, uye kugadzira (senge mota dzemotokari). Chinhu chayo chinozivikanwa ndeyehuremu hweyunifomu yechimwe chikamu. Sheet simbi zvigadzirwa zvine hunhu hwehuremu huremu, simba rakakwira, magetsi conduction, yakaderera mutengo, uye yakanaka kuwanda kugadzirwa kuita. Ivo vane akasiyana siyana ekushandisa. Sheet simbi kugadzira kwave kushandiswa zvakanyanya muminda yemagetsi, kutaurirana, mota indasitiri, uye zvekurapa zvekushandisa. Semuenzaniso, mumakesi kesi, nharembozha, uye MP3, sheet sheet chikamu chakakosha. Uye zvakare, inoshandiswa mukugadzira michina yezvokurapa, uye inoshandiswa zvakare mumotokari nemotokari (matori) miviri, ndege fuselages nemapapiro, matafura ekurapa, kuvaka matenga (kuvaka) uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa.
Zvakanakira Shanghai Ouzhan jira simbi vachikotama kushandisa michina zvikamu
- Roughness rutapudzo
- Flat pamusoro
- Ziva akawanda mabasa akadai deburring, chamfering, makorari, kuwacha, nezvimwewo
- Kune zvikamu zvisina kujairika, makona asingaoni, maburi, nezvimwewo, zvakaita semakomba nemachubhu, zvinogona kukwenenzverwa
- Yakagadzirirwa nguva, yekukurumidza kumhanyisa kumhanya, iri nyore uye yakachengeteka mashandiro
- Variable frequency kugadziridza kusangana kwakasiyana makorari zvido
Custom jira simbi vachikotama muchina zvikamu
Mashoko Cold inotenderera ndiro, ndiro yakakwenenzverwa, simbi isina chinhu, yakachena aluminium uye aluminium alloy, yakachena mhangura nemhangura chiwanikwa, isina simbi pamusoro pekugadzirisa tekinoroji
Surface kurapwa Kurapa kwepamusoro kunoitwa zvinoenderana nehunhu hwezvinhu zvakagadzirwa uye zvinodiwa nevatengi kuti vawane mhedzisiro yakanaka uye yakasimba.
Maitiro makuru Sheet simbi vakafugama kugadzira
Kudzora kwemhando Kudzora Kubva pane zvinhu kusvika kurongedza, iyo yose nzira yekuronga yekuyera muchina yakanyatso kudzorwa.
Kushandisa Sheet simbi kugadzira kwave kushandiswa zvakanyanya mumagetsi zvigadzirwa, kutaurirana, mota indasitiri, zvekurapa zvekushandisa uye mamwe minda, senge makomputa makesi, nhare mbozha, zvekurapa zvekugadzira zvigadzirwa, mota nemotokari (matori) miviri, ndege fuselages nemapapiro, Medical tafura, kuvaka denga (kuvaka) uye zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa
Pashure: Sheet simbi zvikamu dzakakotama
Zvadaro: OEM jira simbi vachikotama zvikamu